လီဗာပူး နဲ့ တှတေို့ငျး မနျယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားဟနျကို မေးခှနျး ထုတျလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့ - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး နဲ့ တှတေို့ငျး မနျယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားဟနျကို မေးခှနျး ထုတျလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
မနညေ့က အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကခြဲ့ပွီးနောကျ ယာဂနျကလော့ က မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ခံစဈ အားပွု ကစားဟနျဟာ ဒီပှဲစဉျ ရဲ့ သမိုငျးကွောငျးနဲ့ ကိုကျညီမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။ ခံစဈမှာ ငါးယောကျ ထားကစား သှားခဲ့တဲ့ သရဲနီ တို့ဟာ မနညေ့က ပှဲစဉျ အတှငျး ဘောလုံး ပိုငျဆိုငျမှု ၃၂% သာ ရှိခဲ့ပွီး မားကပျရပျဖို့ဒျရဲ့ ဦးဆောငျဂိုးကို ရရှိ ခဲ့ပွီးနောကျ ပှဲခြိနျ တျောတျောမြားမြား ခံစဈမှာသာ ထိုငျကစား သှားခဲ့ ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး အဒမျလယျလာနာဟာ ဧညျ့သညျ အသငျး အတှကျ ၈၅ မိနဈမှာ ခပြေဂိုး ပွနျလညျ သှငျးယူ ပေးခဲ့တာကွောငျ့ လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ မှာ ရှုံးပှဲ မကွုံခဲ့ ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျဘကျ အသငျး ရဲ့ နညျးစနဈပိုငျး နဲ့ ပကျသကျပွီး ကလော့က သူ့ရဲ့ လကျထကျ လီဗာပူး တို့ အိုးထရပျဖို့ဒျကို လာကစားတဲ့ အခြိနျတိုငျး ယူနိုကျတကျဟာ ခံစဈကိုပဲ အမွဲ ထိုငျကစားလေ့ ရှိတယျလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ နညျးစနဈဟာ ဈျိတျပကျြစေ ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ကလော့ က “ကြှနျတျော ဘာကွောငျ့ ဒါကို စိတျပကျြ နရေမှာလဲ? ကြှနျတျောဟာ မနျယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားဟနျနဲ့ ပကျသကျပွီး စိတျပကျြနသေငျ့တဲ့သူ မဟုတျပါဘူး။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ ဒီမှာ လာကစားတဲ့ အခါ ဖွဈလေ့ ရှိတဲ့ အခကျြတဈခု ပါပဲ။ ဒီနှဈ ၊ မနှဈ နဲ့ တဈမွနျနှဈက သူတို့ဟာ ခံစဈကိုပဲ ထိုငျကစား ခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ အိုကပေါတယျ။ ဝဖေနျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ထောကျပွစရာ အခကျြတဈခု သာသာပါပဲ။ ခငျဗြားတို့ ဒီပှဲကို မွငျခဲ့မှာပါ။ အားလုံး ပြျောရှငျ ခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးနဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားပုံကို တှေးကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါ နှဈသငျးစလုံးဟာ ဒီလို ပုံစံနဲ့ပဲ ကွိုးစား ခဲ့ကွပါတယျ။ အရညျအသှေးပိုငျး မှာလညျး ယူနျိုကျတကျနဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ကြှနျတျောတို့ဟာ စိတျဓာတျ တကျကွှနေ ခဲ့ပါတယျ။ သူတို့မှာ ဒီလို အရညျအသှေးမြိုး ရှိတာကွောငျ့လညျး ဒီလိုမြိုး ကစားကှကျ ခခြဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကစားရ တဈကယျ ခကျခဲပါတယျ။ ဒါဟာ အကွောငျးပွခကျြတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဒီထကျ ပိုကောငျးအောငျ လုပျနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ ထားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီနထေ့ကျ ပိုကောငျးအောငျ ကစား နိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနတေ့ော့ မကစား နိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အသငျးတိုငျးကို ဒီလိုမြိုး ခံစဈ ကစား သှားလို့ မရပါဘူး။ ယူနိုကျတကျတို့ ဒီနေ့ ကစား သှားခဲ့တဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့။’ လို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
ယူနျိုကျတကျရဲ့ ခညျြးကပျပုံဟာ လီဗာပူး အတှကျ ဂုဏျယူစရာလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ကလော့ က “ဒါဟာ ဂုဏျယူစရာလို့ ကြှနျတျော မထငျပါဘူး။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အသငျးကောငျး တဈသငျး ဆိုတာ ပွသတာ ဖွဈပွီး ကြှနျတျောတို့ကို ဘယျလို ရပျတနျ့ ရမလဲ ဆိုတာ တှေးတာဟာ သာမနျ ပါပဲ။ ပထမပိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ ပွောစရာ အမြားကွီး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ရပျတနျ့ စခေဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ တို့ ခံစဈကို အကောငျးဆုံး ကစား သှားတာတော့ အမှနျပါပဲ။ ပွီးတော့ သူတို့မှာ အရမျး မွနျတဲ့ ရပျဖို့ဒျ နဲ့ ဂြိမျးဈ တို့ ရှိနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာ မဖွဈပါဘူး။ နောကျကနေ ဘောလုံးကို ခုတျတငျ ပေးလိုကျတာနဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုက စတာ ပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယျ့အတှကျ သိပျတော့ မကောငျးခဲ့ဘူး။ ကြှနျတျောတို့ ဒီအပိုငျး တဈခုတညျးကိုပဲ တားဆီး ခဲ့ရပွီး ကြှနျတျောတို့ ခံစဈ ကစားတာ အိုကပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွီးပွညျ့စုံအောငျတော့ မတားဆီး နိုငျပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယျ့ဘကျက ဘောလုံး ဆုံးရှုံးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဟာ ခံစဈကို ကြျောပွီး ပေးပို့ ကွတာကွောငျ့ပါ။
ကြှနျတျောတို့ ဒီထကျ ပိုကောငျးအောငျ ကစား နိုငျခဲ့ သငျ့ပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မြှျောလငျ့ ထားတဲ့ အရာပါ။ ဒ့ါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ကို ဝဖေနျစရာ မရှိသလို အကဲဖွတျစရာလညျး မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့နဲ့သာ သကျဆိုငျ ပါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
လီဗာပူး နဲ့ တွေ့တိုင်း မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားဟန်ကို မေးခွန်း ထုတ်လိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
မနေ့ညက အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့ပြီးနောက် ယာဂန်ကလော့ က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခံစစ် အားပြု ကစားဟန်ဟာ ဒီပွဲစဉ် ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ ခံစစ်မှာ ငါးယောက် ထားကစား သွားခဲ့တဲ့ သရဲနီ တို့ဟာ မနေ့ညက ပွဲစဉ် အတွင်း ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်မှု ၃၂% သာ ရှိခဲ့ပြီး မားကပ်ရပ်ဖို့ဒ်ရဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးကို ရရှိ ခဲ့ပြီးနောက် ပွဲချိန် တော်တော်များများ ခံစစ်မှာသာ ထိုင်ကစား သွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အဒမ်လယ်လာနာဟာ ဧည့်သည် အသင်း အတွက် ၈၅ မိနစ်မှာ ချေပဂိုး ပြန်လည် သွင်းယူ ပေးခဲ့တာကြောင့် လီဗာပူးဟာ ဒီရာသီ မှာ ရှုံးပွဲ မကြုံခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် အသင်း ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကလော့က သူ့ရဲ့ လက်ထက် လီဗာပူး တို့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကို လာကစားတဲ့ အချိန်တိုင်း ယူနိုက်တက်ဟာ ခံစစ်ကိုပဲ အမြဲ ထိုင်ကစားလေ့ ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ နည်းစနစ်ဟာ စိ်တ်ပျက်စေ ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကလော့ က “ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒါကို စိတ်ပျက် နေရမှာလဲ? ကျွန်တော်ဟာ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားဟန်နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ပျက်နေသင့်တဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ လာကစားတဲ့ အခါ ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အချက်တစ်ခု ပါပဲ။ ဒီနှစ် ၊ မနှစ် နဲ့ တစ်မြန်နှစ်က သူတို့ဟာ ခံစစ်ကိုပဲ ထိုင်ကစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အိုကေပါတယ်။ ဝေဖန်စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ထောက်ပြစရာ အချက်တစ်ခု သာသာပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ဒီပွဲကို မြင်ခဲ့မှာပါ။ အားလုံး ပျော်ရွှင် ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးနဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံကို တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဒီလို ပုံစံနဲ့ပဲ ကြိုးစား ခဲ့ကြပါတယ်။ အရည်အသွေးပိုင်း မှာလည်း ယူနိုက်တက်နဲ့ ကစားတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွနေ ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဒီလို အရည်အသွေးမျိုး ရှိတာကြောင့်လည်း ဒီလိုမျိုး ကစားကွက် ချခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကစားရ တစ်ကယ် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါဟာ အကြောင်းပြချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ထက် ပိုကောင်းအောင် ကစား နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ မကစား နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသင်းတိုင်းကို ဒီလိုမျိုး ခံစစ် ကစား သွားလို့ မရပါဘူး။ ယူနိုက်တက်တို့ ဒီနေ့ ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။’ လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ချည်းကပ်ပုံဟာ လီဗာပူး အတွက် ဂုဏ်ယူစရာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကလော့ က “ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာလို့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တေ်ာတို့ အသင်းကောင်း တစ်သင်း ဆိုတာ ပြသတာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို ရပ်တန့် ရမလဲ ဆိုတာ တွေးတာဟာ သာမန် ပါပဲ။ ပထမပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာ အများကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရပ်တန့် စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် တို့ ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ကစား သွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ အရမ်း မြန်တဲ့ ရပ်ဖို့ဒ် နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ကနေ ဘောလုံးကို ခုတ်တင် ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုက စတာ ပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်တော့ မကောင်းခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအပိုင်း တစ်ခုတည်းကိုပဲ တားဆီး ခဲ့ရပြီး ကျွန်တော်တို့ ခံစစ် ကစားတာ အိုကေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံအောင်တော့ မတားဆီး နိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဘောလုံး ဆုံးရှုံးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဟာ ခံစစ်ကို ကျော်ပြီး ပေးပို့ ကြတာကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ကစား နိုင်ခဲ့ သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မျှော်လင့် ထားတဲ့ အရာပါ။ ဒ့ါကြောင့် ယူနိုက်တက် ကို ဝေဖန်စရာ မရှိသလို အကဲဖြတ်စရာလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့သာ သက်ဆိုင် ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။